प्रचण्डलाई कमजोर बनाउन ओलीले चलाएको ‘बामदेव प्रकरण’ | Latest news of Nepal,world news, articles, literature, Business news, Entertainment and more प्रचण्डलाई कमजोर बनाउन ओलीले चलाएको ‘बामदेव प्रकरण’
फागुन १४ गते, २०७६ - १६:२२
काठमाडौं । बुधबार बसेको नेकपा सचिवालय बैठकले राष्ट्रिय सभा सदस्यमा बामदेव गौतमलाई सिफारिस गर्ने त निर्णय गर्यो तर चर्चित बनेको संविधान संशोधन कार्यदल भने भंग गर्न पुग्यो ।
सचिवालयका निर्णयहरु सुनाउँदै पार्टी प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठले संविधान संशोधनका लागि गठित कार्यदलको औचित्य पुष्टी हुन नसकेकोले भंग गरिएको जानकारी दिए । उनका अनुसार पार्टीभित्र र बाहिर संविधान संशोधनको चर्को आलोचना भएपछि कार्यदललाई भंग गर्ने निर्णय गरिएको हो ।
किन भंग भयाे कार्यदल ?
गत शनिबार नेकपा सचिवालय बैठकका केहि निर्णयलाई अतिरञ्जित रुपमा बाहिर ल्याइएपछि नेकपाका शीर्ष नेताहरु विवादमा तानिएका थिए । शनिबार बसेको नेकपा सचिवालय बैठकमा गोप्य राखिएको भनिएको निर्णय (बामदेव गौतमलाई राष्ट्रिय सभा सदस्य बनाउने र राष्ट्रिय सभा सदस्य पनि प्रधानमन्त्री हुन पाउने गरि संविधान संशोधन गर्न कार्यदल गठन गर्ने) एकाएक बाहिर ल्याइएपछि विवादमा तानिएको थियो ।
अतिरञ्जित रुपमा सार्वजनिक भएको निर्णयको असर नेकपा नेतृत्व र सबैभन्दा बढि प्रस्ताव राख्ने पार्टीका कार्यकारी अध्यक्ष प्रचण्डमाथि परेको थियो । साथै त्यो सार्वजनिक निर्णयले राष्ट्रिय सभा सदस्यको लागि भनि प्रस्ताव गरिएका वामदेव गौतमलाई पनि निकै प्रभाव पर्न पुग्यो । निर्णयबारे नेकपाका सचिवालयका दुई नेता ईश्वर पोखरेल र विष्णु पौडेलले सञ्चारमाध्यमसँग दिएका प्रतिक्रियाले पनि झनै अन्यौलता थपेको थियो ।
जसको असर बुधबार बसेको सचिवालय बैठकले कार्यदल गठनको निर्णयलाई फिर्ता गर्दै भंग गर्ने निर्णय गर्यो ।
कसरी भएको थियोे कार्यदल गठन गर्ने निर्णय ?
गत शनिबारको सचिवालय बैठकमा पार्टी अध्यक्ष प्रचण्डले बामदेव गौतमलाई राष्ट्रिय सभा सदस्य बनाउने र राष्ट्रिय सभा सदस्यलाई समेत प्रधानमन्त्री बन्न सक्ने गरि संविधान संशोधन गर्न कार्यदल गठन गर्ने प्रस्ताव राखेका थिए । नेकपा स्रोतले जनाएअनुसार प्रधानमन्त्री एंव पार्टी अध्यक्ष ओलीको सहमतिमै प्रचण्डले उक्त प्रस्ताव राखेका थिए ।
बैठकमा ओलीले राष्ट्रिय सभामा मनोनित हुनेको संख्या ३ बाट ९ पुर्याउने गरि बढाउन प्रस्ताव गरेका थिए । तर ओलीले राखेको प्रस्ताव धेरै सचिवालय सदस्यको असहतीका कारण अस्वीकृत बन्न पुग्यो ।
बैठकमा प्रचण्डले राखेको प्रस्तावलाई सचिवालयले सर्वसम्मत रुपमा निर्णय गरेपनि निर्णय भने सार्वजनिक नगर्ने सहमती गरेको थियो । तर सहमतीलाई लत्याउँदै मिडियामा केहि सचिवालय सदस्यबाट अतिरञ्जित रुपमा बाहिर ल्याइएपछि सचिवालयको निर्णय नै संकट पर्न पुग्यो ।
बामदेवलाई बदनाम बनाउँदै कमजोर बनाउने ओली दाउ
आफैंले निर्णय गरेको भएपनि ओलीले संविधान संशोधन गर्न गठित कार्यदललाई मिडियामार्फत बदनाम गरिदिए । उनले कार्यदललाई बदनाम मात्रै गरेनन् दोस्रो बैठकबाट भंगसमेत गरिदिए । नेकपाभित्र ओलीले अपनाएको राजनीतिक फण्डाले सिधा–सिधा अर्का अध्यक्ष प्रचण्ड र बामदेव गौतमलाई असर गरेको छ ।
मिडियामार्फत अतिरञ्जित रुपमा ल्याइएको यो फण्डाले बामदेव गौतमलाई कमजोर बनाउँदै लगेको छ । ओलीले प्रहार गरेको नयाँ राजनीतिक प्रहारले पार्टीभित्र दरिलो अनि मध्यमार्गी धारको नेतृत्व गर्दै आएका वामदेवलाई केहि अलमल पारेको छ । उनले प्रधानमन्त्रीसम्म बन्ने देखेको सपनालाई तत्काल तुहाईदिएको छ ।
ओलीले भैंसेपाटी गठबन्धन तोड्न खेल खेले
नेकपाभित्र भैंसेपाटी भेलापश्चात बनेको गठबन्धनले ओली एक्लो र संकटमा पर्दै गएका छन् । गत पुस २३ मा बामदेव गौतम निवासमा भएको भेलाले बनेको गठबन्धनबाट एक्लिएका ओलीले गठबन्धन फुस्काउन निकै प्रयत्न गरिरहेका छन् ।
भैंसेपाटी गठबन्धनलाई तोड्न ओलीले गरेको छुट्टै भेलामा आफ्नै विश्वास पात्रसमेत रहेका विष्णु पौडेल नै नगएपछि उनि संकटमा परेका थिए । उनले पार्टीभित्र नेताहरुलाई एक्ला–एक्लै भेट्ने र फकाउने शैली पनि अपनाएका छन् ।
उनले गठबन्धनभित्रै अविश्वास पैदा गराउने र एकपछि अर्को संकट निम्त्याइदिने जुक्ति अपनाइएका हुन् । संविधान संशोधन कार्यदल गठनमा ओलीले अपनाएको जुक्ति त्यसैको प्रतिफल भएको धेरै नेताको बुझाई छ ।
पार्टीभित्र पुनः शक्तिशाली बन्ने दाउ
ओली पछिल्लो समय पार्टीभित्रै निकै कमजोर बन्दै गएका छन् । पार्टीभित्र झिनो संख्याको मतलाई नेतृत्व गर्ने ओलीले एकलौटी रुपमा चलाएको सरकार छोटो अवधिमै निकै बदनामित भएको छ । यति प्रकरण र बाँस्कोटा प्रकरण ओली नेतृत्वका सरकार सामान्य उदाहरण हुन् ।
सरकार सञ्चालनमा गरेको एकलौटी निर्णयले बदनामित ओली पार्टीभित्र पनि एक्लो पर्दै गएका छन् । पार्टीभित्र एकलौटी निर्णय गर्दै आएका उनि पछिल्लो समय घेराबन्दीमा परेका छन् । उनि पार्टीको सचिवालय समिति, स्थायी समिति र केन्द्रीय समितिमा पनि संख्यात्मक रुपमै कमजोर छन् । केहि समय अघि सम्पन्न स्थायी समिति र केन्द्रीय समिति बैठकमा पनि उनको निकै आलोचना भएको थियो । उनको काम गर्ने शैलीप्रति बहुमत सदस्यले प्रश्न उठाएका थिए ।
पार्टी संगठनभित्र कमजोर देखिएका उनि आफ्नो गुमेको शक्ति सन्तु्लनमा ल्याउन चाहन्छन् । ओलीले बामदेव प्रकरणाई उचाल्नुको पछाडि पनि त्यहि उद्देश्यको गन्ध आउँछ । ओलीले आफुँविरुद्धमै केन्द्रित बनेको ‘बाँस्कोटा अडियो प्रकरण’लाई सेलाउन पनि वामदेव प्रकरणलाई योजनागत रुपमा बाहिर ल्याएको धेरै नेताको बुझाई छ ।
फागुन १४ गते, २०७६ - १६:२२ मा प्रकाशित